ရှိခြင်းတရား ယုိုယွင်းနေတဲ့ ပြည်မြန်မာ
အရှိကုို အရှိအတုိုင်း မြင်ခြင်း ဆုိုတာ လောကပါလ တရား ဖြစ်ပါတယ်။ရှိခြင်းတရား ကုို ငြင်းပယ်ပြီး မဟုတ်မမှန်တရားက နုိုင်နေတယ် ဆုိုရင် အဲဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ထူထောင်ထားတဲ့ နုိုင်ငံဟာလဲ အလုိုလုို တခုပြီးတခု ယုိုယွင်းလာတာပါပဲ။အရင်တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဗမာ စစ်ခေါင်းဆောင်များကုို အပစ်ပုံချစမြဲပါ။ အခုတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေသာ မကပဲ မြန်မာပြည်သား တော်တော်များများကလဲ ရှိခြင်းတရားကုို ငြင်းပယ်တဲ့ နေရာမှာ တော်တော်လေး အသားကျနေပြီပဲ၊ ဆုိုတာ သိလုိုက်ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓ တရားတော်မှာ ကံ၊ ကံ၏အကျိုး ဆုိုတာ ရှိပါတယ်။ ကံ ဆုိုတာ အလုပ်၊ ကုိုယ်လုပ်လုို့ ကုိုယ့်ဆီပြန်လာတယ်၊ ဆုိုတဲ့ သဘောတရားပါ။ အဲဒါကုို ၀တ်လည်တယ် ဆုိုပြီး လွယ်လွယ် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့ တရားမှာလဲ “ကုိုယ်စုိုက်သည့်အတုိုင်း ရိတ်ရမယ်” ဆုိုတဲ့ တရားတော် ရှိပါတယ်။ အဲဒါလဲ ၀တ်လည်တာနဲ့ အတူတူပါ။
"သိပ်လည်း ဘ၀င်မမြင့်ကြပါနဲ့" By Kogyimind Mindပြည်တွင်းမှာ နေနေတဲ့ သူတော်တော်များများကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လူမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာမှာပဲ ရှိနေတယ်ထင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဒေါက်တာ ဆွန်ယက်ဆင်၊ ဟိုးဆေးရီးဇော်၊ ဟိုချီမင်း၊ ဂန္ဒီ၊ ချေဂွေဗားရား တို့အကြောင်းမသိကြတော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို လေးစားရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။လေယဉ်ပေါ်ကနေ မြန်မာပြည်ကို မမြင်ဘူးတော့အခုချိန်ထိ Golden Land ဆိုပြီး ဘ၀င်မမြင်ပါနဲ့။ တောတွေပြုန်းပြီး မီးလောင်ပြင်လိုဖြစ်နေတဲ့ လွင်ပြင်၊ တောင်တန်းတွေကိုမှ သူတို့မမြင်ဘူးကြပဲ။တမလွန်အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေ ထုံနေတဲ့ ထမင်းရေ၊ ချောင်းစီးအလှူကြီးမျိုးတွေကိုပဲ မြင်ဖူးပြေီး ဘ၀င်မြင့်မနေပါနဲ့။ ကမ္ဘာ့သူဋ္ဌေးသူကြွယ်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိူးမဖက် ပရဟိတသက်သက်လှူဒါန်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။
သစ်ခုိုးထုတ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ… မြန်မာနုိုင်ငံက သစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ မြန်မာအစုိုးရ ရဲ့ နှစ်စဉ် ပညာရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး ဘက်ဂျက်ထက် ၄ ဆ ပုိုများတယ်။ လုို့ ဆုိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လုို့ ဒီလုို ခုိုးထုတ်လာရသလဲ ဆုိုတော့ ကျနော် ဥပမာ တခုပဲ တင်ပြပါမယ်။မြစ်ကြီးနားက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သစ်အချောထည်၊ ပရိဘောဂ လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်။ မြစ်ကြီးနားမှာတော့ စက်ရုံအဆင့် ဆုိုပါတော့။ ကုန်ကြမ်းကတော့ ဟူးကောင်း ဂျိုင့်ဝှမ်းဒေသ က ပါ။ နှစ်စဉ် ရွှေတူးလုို့ ဒီတုိုင်း အလဟတ ခုတ်လှဲလုိုက်တဲ့ သစ်တွေကုို နှမျောတာက တကြောင်း၊ ဒေသခံတွေ အလုပ်အကုိုင် အခွင့်အလှမ်း ရပါစေ ဆုိုပြီး ရည်ရွယ်လုပ်တာပါ။ သိန်းထောင်ချီ အကုန်ခံပြီး လုပ်တယ်။ မြို့ နဲ့ နဲနဲ ဝေးတဲ့ နေရာ ထိ ကေဗယ်လုိုင်း ကုိုယ့်စရိတ် နဲ့ ကုိုယ်ဆွဲတယ်၊ ထရန်စဖါမာ ကအစ ကုိုယ့် ကုိုယ်ပုိုင် တပ်တယ်။ သိန်း ရာကြီး ကုန်တယ်။ ပုိုက်ဆံ ကုန်တာ အကုန်တွက်လုို့ ရတယ်။ ပုိုက်ဆံ ရှိရင် အချိန်အတုိုင်းအတာ တခုမှာ ပြီးနုိုင်တယ်၊ ဒီအထိ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး ဆုိုပါတော့။ပြဿနာက ပါမစ် ကိစ္စ ပါ။
ညီလေး နဲ့ တခါ စကား ပြောဖြစ်ပါတယ်….သူ့ အပြော.. သူ့ဟန်ပန် အမူအရာတွေက အင်မတန် တက်ကြွနေတဲ့ နုိုင်ငံ့သားကောင်း တစ်ယောက်ပုံစံပါ။ရုိုးရှင်းစွာ ခံယူထားတဲ့ သူ့ မျိုးချစ်စိတ်ကုိုလဲ မလေးစားပဲ မနေနုိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမယ့် ညီလေးမှာ ဖတ်စရာ စာပေ ကောင်းကောင်း မရှိတာတော့ သေချာတယ်… နှစ် ၅၀ လုံးလုံး စာပေစိစစ်ရေး ဆုိုတဲ့ ဂိတ်ကနေ ဘယ်လုိုမှ မထွက်နုိုင်တဲ့ နုိုင်ငံရေး အတွေးအမြင် စာပေ ကောင်း တွေဟာ ညီလေး အပါအ၀င် မြန်မာ လူထု အထဲကုို မရောက်လာတာ နှစ်တွေ မနဲတော့ဘူးလေ… ဆက်ဖက်ရန် »
လန်ဒန်မှာ လူဖြူတွေ လူနည်းစု ဖြစ်လာ
၂၀၁၁ ခုနှစ် သန်းခေါင် စာရင်း စစ်တမ်း အရ ဗြိတိန်နုိုင်ငံ လန်ဒန် မြို့မှာ အင်္ဂလိပ် လူမျိုး လူဖြူ တွေက စုစုပေါင်း လူဦးရေ ရဲ့ ၄၅ % သာရှိပြီး လူနည်းစု ဖြစ်လာရကြောင်း သိရပါတယ်။အဲဒီ အကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နုိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များပါဝင်တဲ့ တီဗီ တုိုက်ရုိုက် ထုတ်လွင့်မှု မှာ ပြောကြဆုိုကြတဲ့ အထဲမှာ လူဖြူ လူငယ် တစ်ယောက်က အဲဒီလုို ဖြစ်လာရတာဟာ ကောင်းသလား၊ ဆုိုးသလား? ဆုိုတဲ့ မေးခွန်း မေးခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ဖြေတဲ့ လူဖြူ နုိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ပြောသွားတာဟာ အင်မတန် လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။ သူပြောသွားတဲ့ အထဲမှ တချို့ ရေးပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့.. ဒီ အကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က ကျနော့ ပါတီအစည်းအဝေး မှာ ပြောဖူးပါတယ်။ ကျနော်တုို့ဆီမှာ လူဖြူ မဟုတ်တဲ့ လူတွေ မွေးဖွါးနှုန်းမြန်တယ်၊ ဒီနုိုင်ငံမှာ မွေးလာတဲ့လူတွေ များလာတယ်၊ ဟုတ်ပြီ၊ ကျနော်တုို့ ဘယ်သူမှ သမုိုင်းကုို နောက်ပြန်ရစ်လုို့ မရဘူး။ ဒီတော့ ဒီနုိုင်ငံမှာ မွေး၊ ဒီနုိုင်ငံမှာ ဥပဒေ အရ တရားဝင် ကြီးပြင်းလာတဲ့ မည်သည့် လူမျိုး၊ အသားအရောင်မဆုို ဒီနုိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ ချိုးဖေါက်မှုမျိုး မလုပ်ဘူး ဆုိုရင် နုိုင်ငံ့ ကောင်းကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ယူရမယ်။ အားလုံးကုို တန်းတူ အခွင့်အရေး နဲ့ ကြိုးစား ရပ်တည်ခွင့် ပေးရမယ်။ ဒါမှလဲ ဒီနုိုင်ငံလဲ တုိုးတက်လာမှာ ဖြစ်တယ်။ လုို့ ဆုိုပါတယ်။သူတုို့ ဆီမှာ ဒီလုို အမျော်အမြင်ကြီးတဲ့ နုိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိနေလုို့လဲ ဒီလုို ဘ၀မျိုး ပုိုင်ဆုိုင်နုိုင်တာ မဆန်းပါ။ဗီဒီယုို သတင်း ကြည့်လုိုသူများအတွက် လင့်https://www.facebook.com/photo.php?v=609529589139884
သန်းခေါင် စာရင်း ကိစ္စ ပြောကြဆုိုကြ
အခုတလော သန်းခေါင် စာရင်း က သိပ် ကုို အလောတကြီး ဖြစ်နေပုံ ရပါတယ်။
(၁) အလှူရှင်နုိုင်ငံများ ဆုိုတဲ့ နေရာမှာ ကမ္ဘာဘဏ် အဖွဲ့သားတွေက မြန်မာပြည်မှာ ဈေးကွက်စီးပွါးရေး အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖုို့ ဒေတာ လုိုအပ်နေတာ အမှန် ဖြစ်တယ်။
(၂) ဗမာ အစုိုးရ ကတော့ ရတဲ့ အခွင့်အရေး ကို ထိထိမိမိ ဗမာ အတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတယ်။ အဲဒီလုို နေရာမှာ ဗမာ အုပ်စု အားလုံး ညီသွားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အစ၊ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ အဆုံး လက်တွဲညီသွားတယ်။
(၃) DVB အထူးအစီအစဉ်မှာ ပြောကြဆုိုကြတဲ့ အထဲမှာ နားထောင်ရင် သိနုိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ကုို အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆုိုခြင်း။
လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ဘ၀ လုံခြုံရေး ဖြစ်တယ်၊ တဲ့။ အပစ်အခတ်ရပ်ယုံကုို ပြောတာ မဟုတ်။
ဒီတော့ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ဘ၀ လုံခြုံရေး ကုို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုိုရင် အခု ဘာ အပစ်အခတ်မှ ရပ် စရာ မလုိုတဲ့ (အပစ်အခတ်မရှိတဲ့) အောက်မြန်မာပြည်သား အားလုံး တကယ် ငြိမ်းချမ်းပြီလား၊ ဆုိုတဲ့ အချက် ကုို စဉ်းစားရမယ်။ ကျန်တုိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ထားပါ၊ အပစ်အခတ်မရှိလဲ ငြိမ်းချမ်းအောင် မနေတတ်တဲ့ မိစ္ဆာများ ရှိနေသေးသ၍ မငြိမ်းချမ်းနုိုင်ဘူး ဆုိုတာ သိလုို့ တော်လှန်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ဘ၀ လုံခြုံရေး ဆုိုတဲ့ နေရာမှာ နေမှု၊ ထုိုင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု ဆုိုတဲ့ အခြေခံကျသော သဘောတရား အားလုံးကုို ပေါင်းပြီး ပညာရှင်တွေက wellbeing လုို့ပြောကြပါတယ်။ ဒီလုို အခြေခံကျတဲ့ wellbeing components များပြည့်စုံမှသာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး (Peace) ဆုိုတာ ဖြစ်လာတယ် လုို့ ဆုိုပါတယ်။
ဒီတော့ တခုချင်း စဉ်းစားရအောင်…
လက်မှတ်မထုိုးရင် လုိုင်ဇာ သိမ်းမယ် ဆုိုသတဲ့။
မြန်မာ Piss စင်တာ အဖွဲ့ ထုိုင်းနုိုင်ငံကုို ရောက်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ် မထုိုးရင် လုိုင်ဇာ သိမ်းမယ် ဆုိုတဲ့ စကား လာပြော ကြောင်း သိရပါတယ်။
အော် မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး… တော်တော် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ စကား ပြောတတ်တယ်။
by Leonard Shinra Chanမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုက်ပွဲဟာ အိုင်ဒန်ဒတီ တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးပေါင်းများစွာက ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဒီကနေ့ အထိ လှုပ်ရှားမှုများရှိနေကြခြင်းဟာ မိမိတို့ အိုင်ဒန်ဒတီ ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လိုတဲ့အတွက်ပါ။ ကျနော်တို့ ဟာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ကိုလိုနီခေတ် ကုန်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာမှ အကျဉ်းကျခံထားရတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံလူသားများ ဖြစ်လာကြတဲ့အခါ မိမိတို့ ရဲ့ အိုင်ဒန်ဒတီကို စွဲကိုင်ရတော့ မယ်လို့ပိုမို ခံယူလာခဲ့ကြတယ်။ ဒီအိုင်ဒန်ဒတီဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့ လွတ်လပ်စွာဖြစ် တည်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ ရိုးရာအမွေအနှစ်တွေကို သယ်ဆောင်နေ တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒီအိုင်ဒန်ဒတီဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့အနာဂတ် အထိပါတယ်လို့ ရိုးရှင်းစွာ ခံယူထားကြသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ဟာ လူသားဖြစ်မှုအခြေခံဆိုတဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ ဘယ်တော့မှ လုံလောက်စွာ ဦးစားပေး မခံခဲ့ရလို့ လဲ ဖြစ်တယ်။ လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တပိုင်တနိုင်လေး အုပ်စုဖွဲ့ တည်နိုင်မှ ရရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးလို့ဘ၀ကနားလည်လာစေ ခဲ့တော့ အိုင်ဒန်ဒတီ ဆိုတာဟာ ကျနော်တို့ လူတိုင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အသွေးအသက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တကယ့်တကယ်မှာလဲ ဒီအိုင်ဒန်ဒတီများဖြစ်တည် လာခဲ့ရတာ သွေးနဲ့ ၊ ချွေးနဲ့ ၊ ဘ၀နဲ့ ၊ တိုက်ပွဲများနဲ့ ၊ အချိန်ကာလများနဲ့ရင်းနီးခဲ့ရတာ ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအိုင်ဒန်ဒတီကြောင့် ကျနော်တို့ ဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ နာကျဉ်ရတယ်၊ ခံစားရတယ်၊ အနှိမ်ခံရတယ်၊ အထုအထောင်းခံရတယ်၊ အသက်ပေး ခဲ့ရသူတွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဟာ ဒီအိုင်ဒန်ဒတီကြောင့်ပဲ ပိုမိုသတ္တိတွေ ရှိလာခဲ့ကြတယ်၊ ပိုမိုစွန့် စား လာခဲ့ကြတယ်၊ ပိုမိုပေးဆပ်လာခဲ့ကြတယ်၊ ပိုမိုမာကျော လာခဲ့ကြတယ်၊ ပိုမိုရင့်ကျက် လာခဲ့ကြတယ်။ ပိုမို ယဉ်ကျေးလာသလို ပိုလို့ လဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများးကို ရင်ဆိုင်ဖို့တခါတရံမှာ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။
္လဒီမုိုကရေစီ ပြောင်းပြန် မှအစ အပစ်ရပ် ပြောင်းပြန်သုို့
တကယ်တမ်း အပစ်ရပ် ဖုို့ ဆုိုရင် အင်အားကြီးသူတွေရဲ့ သဘောထားက စစ်မှန်ဖုို့ လုိုတယ် လုို့ ၀ါရင့် သတင်းစာ ဆရာကြီး ဘာတေ လက်တ်နာ ပြောလုိုက် ပါတယ်။
မတ်လ ၁၇ နေ့ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင် နှင်းဆီ ခန်းမ မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလုိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတဲ့ အခါ အရင်ဆုံး စကားပြောမယ် ပြီးတော့မှ သဘောတူညီချက်ကုို နောက်မှ ယူရမယ် ဖြစ်တယ်။ အဲလုို မဟုတ်ပဲ အခုဟာက ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတယ်။ တကယ် ညှိနှုန်းမှု ဖြစ်တဲ့ အခါနုိုင်ငံခြားသားကတော့ ပြောမှာပဲ နောက်မှ စကားပြောမယ် လုို့ ပြောမှာပဲ၊ ၁၉ ၉ ၄ တုန်းက ဆုိုရင် ကချင် အဖွဲ့နဲ့ စကားပြောခဲ့ပါတယ်၊ အုပ်ချုပ်သူ အစုိုးရက စစ်အစုိုးရ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ငါတုို့ တရားဝင် အစုိုးရ မဟုတ်ဘူး၊ ခဏ တာဝန်ယူထားတဲ့ အစုိုးရသာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်မှ ပြောရတာပေါ့၊ အခု လက်မှတ်ထုိုးလုိုက်ပါ လုို့ ပြောလုိုက်တယ်။ အဲဒီ တော့ နောက်မှသာ ပြောကြပါ ဆုိုတဲ့ စကားအတွက် ကချင် အဖွဲ့တွေက နှစ်ပေါင်း များစွာ စောင့်ခဲ့ရတယ်။ဒီ ကိစ္စမှာ အရင်ဆုံး စကား မပြောပဲနဲ့ လက်မှတ်ထုိုးလုိုက်ကြရအောင် ဆုိုရင် အခုလုို ပြောတဲ့ လူရဲ့ ရင်ထဲက စကား စစ်မှန်ဖုို့ကုို မေးခွန်းထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဂျွယ်ရှိန်ရာ ၀န်ပေါင် အစပါ။
မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ၀န်ပေါင်မြေ အစစ်ပါ။
ဘိုးဘွားများရဲ့ အမွေ၊ အဖိုးတန်ဓန ပြည့်နေတာ။
ကမ္ဘာ တည် သ၍ တည်စေသတည်း။
ညီလေး နဲ့ တခါ စကား ပြောဖြစ်ပါတယ်…. သူ့ အပြော.. သူ့ဟန်ပန် အမူအရာတွေက အင်မတန် တက်ကြွနေတဲ့ နုိုင်ငံ့သားကောင်း တစ်ယောက်ပုံစံပါ။ ရုိုးရှင်းစ...
အရှိကုို အရှိအတုိုင်း မြင်ခြင်း ဆုိုတာ လောကပါလ တရား ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိခြင်းတရား ကုို ငြင်းပယ်ပြီး မဟုတ်မမှန်တရားက နုိုင်နေတယ် ဆုိုရင် အဲဒီ လူ့အ...
တပ်မ ၆၆ နဲ့ အားမရတော့ တပ်မ ၈၈ ပြန်တက်မယ်တဲ့။
ဒီပုံကတော့ ဒီရက်အတွင်း ဗမာတပ်မ ၆၆ က ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၁) ဌာနချုပ် (ပူတာအို) ဖက် ထိုးစစ်ဆင် တုန်းက ကျဆုံးသွားတဲ့ ရ၀မ်လို့ယူဆရတဲ့ တိုင်းရင်းသ...
သစ်ခုိုးထုတ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ… မြန်မာနုိုင်ငံက သစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ မြန်မာအစုိုးရ ရဲ့ နှစ်စဉ် ပညာရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး ဘက်ဂျက်ထက် ၄ ဆ ပုိုများတယ်။ လုို့ ဆုိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့...
မြန်မာ Piss စင်တာ အဖွဲ့ ထုိုင်းနုိုင်ငံကုို ရောက်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ် မထုိုးရင် လုိုင်ဇာ သိမ်းမယ် ဆုိုတဲ့ စကား လာပြော ကြောင်း သိရပ...
အခုတလော သန်းခေါင် စာရင်း က သိပ် ကုို အလောတကြီး ဖြစ်နေပုံ ရပါတယ်။ (၁) အလှူရှင်နုိုင်ငံများ ဆုိုတဲ့ နေရာမှာ ကမ္ဘာဘဏ် အဖွဲ့သားတွေက မြန်မာပြည...
"သိပ်လည်း ဘ၀င်မမြင့်ကြပါနဲ့" By Kogyimind Mind ပြည်တွင်းမှာ နေနေတဲ့ သူတော်တော်များများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လူမျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာမှာပဲ ရှိနေတယ်ထင်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်...
Duwa Kachin ၂၀၁၁ ခုနှစ် သန်းခေါင် စာရင်း စစ်တမ်း အရ ဗြိတိန်နုိုင်ငံ လန်ဒန် မြို့မှာ အင်္ဂလိပ် လူမျိုး လူဖြူ တွေက စုစုပေါင်း လူဦးရေ...
နုိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ဆုိုသူတွေရဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ကို ဝေဖန်ခြင်း
သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် မြစ်ကြီးနား ရောက်တော့ ရပ်မိ ရပ်ဖတွေ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေကုို ဆန်အိတ်အလှူတွေ ပေးတယ် လုို့ ပြောပါတယ်။ ဟုိုး အရင်တုန်းက...
လူကုန်ကူးခံရသူများ ယာယီစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ ကော့သောင်းမှာ ဖွင့်
စဈတပျထိုးစဈ ရပျဖို့ ဖကျဒရယျကောငျစီ တောငျးဆို
တောင်ကြီး- ဟိုပုံးလမ်းတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ ၃၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
စစ်မှန်သည့်ဖက်ဒရယ် မရမချင်း လက်နက်ကိုင်မည်ဟု ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ပြော
Salween Institute (SI) for Public Policy ဒါရိုက်တာ စောကပီနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ဦးနထန်း ကွယ်လွန်
မှနျရိုးရာ အခွခေံ တူရိယာသငျတနျး ဖှငျ့လှဈ
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိ
ဘမ်ခုန်ယန်ကျေးရွာ KIA အုပ်ချုပ်ရေရုံးကို အစိုးရသိမ်းပိုက်
ကရင်ပြည်နယ်တွင် အခြေချမည့် သမီးကလေးရွာခံများ တားမြစ်ခံရ
မေရီချက်ပ်မင်ကျောင်း အခြေခံ လက်တင်ဂီတ ဘာသာ စကား သင်ကြားပေးမည်
အင်ဒိုနီးရှား အငွေ့အသက်များနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာIKA ရဲ့ဖက်ရှင်ပြပွဲမြင်ကွင်းများ
အလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၇၅၄
KBC garum ningtum hte Shingjai Hpyen Dabang Dum Nta ni hpe Atsawm sha gaw gap la lu
Mandalay-Myitkyina railway schedules suspended due to Kachin fighting
ကရင်နီတို့ရဲ့ စုပေါင်း ကေးထျိုးဘိုး ပွဲတော်
Football: Sevilla down Valencia to edge towards Europa final
VIDEO: Where Bollywood meets Travolta
A five-star hotel ... that flies
The Public Editor's Journal: Aftermath of Ukraine Photo Story Shows Need for More Caution
SYRIA - For Ban Ki-moon, all Syrian factions guilty of blocking humanitarian aid
OBAMA IN ASIA US 'pivots', China reaps dividends
Golden Jubilee of Shan State Army founding to be held at SSA HQ
KIO's Gun Maw arrives in Washington as clashes displace 3,000
Barclays pushed into £6bn cash call to plug capital gap
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 5.4 ( Keygen )
Ning fawn mung masa ( DAW I )Though your beginning was small, your latter days will be very great.(Job 8:7 NRS )
KNO URGENT PRESS RELEASE
Gade n na yang Hkrang n nang hte Blog bai ka na !
Wang da kata na asuya dap shamu shamawt lam hpe KIA jaugawng kasat
အသားဟင်းများ နူးအိစေလို့့့ 
Christmas ngu ai gaw Rawt Malan niashangai nhtoi re
ဦးဝင်းတင်အတွက် ဦးနေဝင်းရဲ့ မြေး အေးနေဝင်းပြောတဲ့ အမှတ်တရများ
ဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်သွားမှုအပေါ် နှမြောတသ ကြေကွဲရပါသည်။
...ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈာပနပွဲ...
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ဂူသွင်းသဂြိုဟ်ခဲ့၊ ဂူသွင်းရာနေရာသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်သူလူထုအများအပြား လိုက်လံ ပို့ဆောင်ခဲ့ (ရုပ်သံ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ ဝင် ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဈာပန
အကြေကွဲရဆုံး နေ့ 
Fort Hood ပစ်ခတ် မှု လေးဦး သေ ၊ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
တုံးအ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြက် တဲ့ယောက်ျား
အဝေးနယ်ချဲ့ ၊ အနီးနယ်ချဲ့နဲ့ မျက်ရည်ကြားက ဟားတိုက်ရယ်ကြရမယ့်သူတွေ
မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတံခါးကို ပြင်းထန်စွာ လာခေါက်ခြင်း
Artist Htein Lin - Remembering Zarganar - 3
Copyright by Kachin Duwa. Simple template. Powered by Blogger.